जीवनशैली Archives - Page3of 60 - Purbeli News
कञ्चनपुर / आकर्षक पहिरनका लागि कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका आदिवासी रानाथारु समुदाय धनी मानिन्छ । सो समुदायका महिलाले लगाउने विशिष्ट प्रकारको मौलिक परम्परागत पहिरनको आकर्षण पछिल्ला वर्षमा बढ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युवलगायतमा राना थारु समुदायका पहिरनको प्रचारप्रसारमा जोड दिन थालिएपछि विगतमा हराउँदै जान थालेको सो पहिरनको संरक्षणमा प...
विराटनगर / ‘योग गरौँ डटेर, कोभिड जान्छ हटेर’ प्रमुख नाराका साथ छैटौँ राष्ट्रिय योग दिवस–२०७७ आज यहाँ मनाइएको छ । मानिसको जीवन शैलीलाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण योग नियमित गर्नुपर्ने योगगुरुहरु बताउँछन् । योगले मानिसलाई निरोग मात्र नभई दीर्घजीवी पनि बनाउने योग गुरुको भनाइ छ । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ऊर्जा पृथ्वीतिर केन्द्रित भएका समयमा योग गर्न सकेमा...
कपालमा चाया पर्नु हिजोआज हामी सबैको समस्या नै बनिसकेको छ । जति नै सुकै सफा सुग्घर र आकर्षक बनेर हिडेपनि यदि कपालमा टलक्क चाया टल्कियो भने त्यसले पक्कै पनि हाम्रो इमेज खराव पार्दछ । कयौ पटक थुप्रै औषधि र स्याम्पुहरुको प्रयोग गर्दा पनि ननिख्रेको चाया सामान्य कुराहरुले निख्रने गर्दछ जसको लागि हामीलाई त्यस सम्वन्धि ज्ञान आवश्यक छ । तसर्थ जानिराखौ चाया ...
महिलाले परिवार नियोजनका लागि गर्भनिरोधक चक्कीहरू प्रयोग गर्छन् । तर धेरै महिलाहरूको दिमागमा एउटा शंका उब्जिन्छ कि यस्ता औषधिहरुले साइड इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन ? त्यसको प्रयोग गर्ने सही तरिका के हो ? त्यसलाई कतिन्जेल उपभोग गर्न सकिन्छ ? त्यहाँ उपभोगका कारण महिलाको मासिक चक्र प्रक्रियामा कुनै समस्या हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा यदि यी प्रश्नको उत्तर प्राप...
यौन स्वस्थ जीवनको आवश्यकता हो र यसलाई कुनै रोगमा पनि पूर्ण रूपमा वर्जित विषय मानिँदैन। शारीरिक तथा मानसिक अवस्था एवं उपर्युक्त व्यक्ति तथा वातावरण जस्ता विषयले यौनको नतिजा फरक पार्न सक्छन्। यौन सम्पर्कको चरम उत्तेजनाको समयमा मुटुको चाल तथा रक्तचाप पनि केही बढ्ने भएकोले मुटुलाई थप दबाबचाहिँ पर्नसक्छ। यही कारणले मुटुको धमनीको रोग भएका व्यक्तिमा के...
काठमाडौं / वास्तुशास्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो जसले परिवारको सुख समृद्धिको लागि प्रकृतिको उर्जा, स्रोत र पारिवारिक उर्जाको सही र सन्तुलित प्रयोग गर्न सिकाउँछ। जसले सफल जीवन बनाउँछ । यसैले विश्भरीका मानिसहरुले यो शास्त्रलाई अनुशरण गरिरहेका हुन्छन् । यसमा उल्लेख गरिएका यस्ता धेरै उपायहरू छन्, जसले जीवनका सबै समस्याहरूलाई एक क्षणमा हटाउँदछन्। यी उप...
कसरी गर्ने भित्री बस्त्रको प्रयोग ? ध्यान दिनैपर्ने यी कुरा !
पहिरनको कुरा गर्दा हामी बाहिरी बस्त्र सम्झन्छौं, जसले हाम्रो आङ ढाक्छ । लाज ढाक्छ । जाडो र गर्मीबाट शरीरलाई सन्तुलित राख्छ । स्टाइलिस देखाउँछ । फेसनेबल देखाउँछ । व्यक्तित्व बढाउँछ । त्यही कारण हामी बाहिरी बस्त्र खरिद गर्दा त्यसको रुपरंग, बनौट सबै कुरामा ध्यान दिन्छौं, ताकि आफुलाई सुहाउँदो होस् । तर, भित्री बस्त्र नि ? अब तपाईं एक कदम पछि हट्न...
परिवार नियोजन साधनमा पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता बढी
काठमाडौँ / परिवार नियोजनको साधनमा महिलाको तुलनामा पुरुषको सहभागिता कम हुने गरेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधन दुवैमा महिलाको सहभागिता पुरुषभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ । परिवार नियोजनको स्थायी साधन मिनील्याप महिला र भ्यासेक्टोमी पुरुषले गर्ने गरेका छन् । पुरुषमा स्थायी भ्यासेक्टोमी र अस्थायी कण्डम मात्र रहेको तथा महिलामा डिपोप्...
दैनिक काजुको सेवनले तपाईको जीवनमा ल्याउनेछ यस्तो चमत्कार
काठमाडौं / शरीरलाई सबैभन्दा फाइदा दिने र महँगो खानेकुरा हो काजु । काजुका सबै फाइदा नै फाइदा छन् । सामान्य मानिसलाई किन्न आँट पनि आउँदैन । महँगो भए पनि काजुका फाइदा भने धेरै छन् । ड्राइ फुडको राजा नै भनिन्छ काजुलाई । यसमा सबै उमेर समूह लाई फाइदा पु¥याउने तत्व । कााजुमा आइरन,पोटासियम,कपर र मेग्रिसियम लगाएतको तत्व प्रशस्त पाइन्छ । हरेक दिन एक टुक्र...
कञ्चनपुर / लोप हुने सङ्घारमा पुगेको लठौवा नाच जोगाउनका लागि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ नौखरीका थारु युवाहरु जुटेका छन । डौना वेवरी लठौवा नाच टोली गठन गरी युवाहरु यो नाच जगेर्नामा लागेका हुन् । युवाहरुले नाच जोगाउनका लागि १२ जनाको टोली बनाएका छन । “थारु समुदायको दशैँ, तिहार, माघीलगायतका चाडपर्वमा देखाइने लठौवा नाच लोप हुन थालेपछि जोगाउनका...